Castgba Akụkọ maka Mmegharị HBO nke Stephen King's 'Theutsider'
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Castgba Akụkọ maka Mmegharị HBO nke Stephen King's 'Theutsider'
by Waylon Jordan January 27, 2019
edere ya Waylon Jordan January 27, 2019
HBO weputara nkwụsị niile na nkedo ntụgharị ọhụụ nke akwụkwọ akụkọ Stephen King Mpụga.
Akwụkwọ akụkọ ahụ, nke wepụtara naanị na May gara aga, bụ nke Media Rights Capital jidere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo ma mechara nweta ya maka usoro dị ole na ole site na HBO.
Otu akụkụ ndị uwe ojii na otu akụkụ egwu karịrị ike mmadụ, Mpụga Ebe a na-enyocha ihe gbasara mmeko nwoke, nwoke na nwanyị, na igbu ya. Ihe dị ka okwu na-emeghe na nke mechiri emechi ga-abụ ọgba aghara dị ka Onye Ọchịchị Ralph Anderson na onye nyocha onwe onye Holly Gibney bidoro igwu ihe banyere ikpe ahụ.
Ndị na-akwado Eze ga-echeta agwa Holly Gibney site na Bill Hodges ewu ewu gụnyere Maazị Mercedes.
Ben Mendelsohn ekwuputala na ọ ga-arụ ọrụ nke Ralph Anderson. Isonyere ya bu Grammy na Tony Award na-emeri omee Cynthia Erivo na ọrụ nke Holly Gibney. Erivo mere a nnukwu ikwommiri na Broadway mgbe o mepere na revival nke Agba Agba, na nso nso a ka ọ pụtara Ndi di ha nwuru na Viola Davis na Michelle Rodriguez.
Onye mmeri Grammy na Tony Award Cynthia Erivo ga-arụ ọrụ Holly Gibney na mmegharị HBO nke Stephen King Mpụga
Dabere na Hollywood Reporter, Mare Winningham (Akụkọ American Horror) ga-esonyekwa ndị nkiri ahụ dị ka Jeannie Anderson,
Ogige Bill (N'abalị nke), Paddy Considine (Oge ochie Bourne, Yul Vazquez (Onye Ọchịchị America), Julianne Nicholson (August: Osage County), Jeremy Bobb (Enweghị Chineke), na Marc Menchaca (Ozark) mejupụta ọrụ ndị ọzọ na ụkpụrụ nkedo.
Jason Bateman ga-arụ ọrụ dị ka onye isi ọrụ na ihe ngosi a, ọ ga-eduzi usoro ihe omume abụọ mbụ.
iHorror ga-edebe gị na mgbasa ozi mgbasa ozi na ndị ọzọ ka ọ na-enweta maka usoro ọhụụ a na-akpali akpali.
njikọ: HBO Na-anabata Stephen King's The outs n'ime usoro nke Ben Mendelsohn
Ben MendelsohnOgige BillCynthia ErivoHBOJeremy BobbJulianne NicholsonOnwuka OchuruMare WinninghamPaddy Considineeze nke ala ezeNdị OutsWaylon JordanChike Onyekwere
Tony Todd kọwara ihe mere O ji jụ 'Candyman vs Leprechaun'
Sundayjọ ụbọchị ụka: 'Luna'